9 प्रभावशाली PowerPoint प्रस्तुतीकरणहरू सिर्जना गर्नका लागि सुझावहरू Martech Zone
बिहीबार, मार्च ० 17, २०२० शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
म अब देखि weeks हप्ता को लागी प्रस्तुतिको तयारी गर्दैछु। जबकि मलाई थाहा छ अन्य स्पिकरहरू उस्तै बासी प्रस्तुति बारम्बार दोहोर्याउँदछ, मेरो भाषणहरू सँधै उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको देखिन्छ जब म हुँ तयारी गर्नुहोस्, निजीकृत गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् र सिद्ध घटना भन्दा उनीहरूको धेरै अघि।
मेरो लक्ष्य कहिले पर्दामा डिक्टेन्ट गर्नु हुँदैन, यो स्मरणीय स्लाइडहरू डिजाइन गर्नु हो जुन भाषणसँगै मिलेर काम गर्दछ। यसले दुबै अनुभूति र मेमोरी बढाउँदछ। किनकि प्राय आधा व्यक्तिहरू डेन्टिस्टलाई भेट्न जानु भन्दा बरु दन्त चिकित्सकलाई हेर्न जान्छन्, त्यसैले मँ सधैं हास्य फाल्ने पनि लक्ष्य राख्छु!
एक अनुसार नयाँ Prezi सर्वेक्षण, Employed०% रोजगारदाता अमेरिकीहरू जसले प्रस्तुतिकरणहरू भन्छन् प्रस्तुतीकरण कार्यहरू उनीहरूको कामको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छन्
क्लेमेन्स लेपर्सले व्यवसायलाई कुरकुरा, गधा लात हान्ने पिचहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ जुन अधिक बिक्रीलाई मनाउँछ र बन्द गर्दछ। उनले सँगै यो इन्फोग्राफिक राखिएको छ Present प्रभावकारी प्रस्तुतीकरणको लागि सुझावहरू:
तपाईंको श्रोतालाई चिन्नुहोस् - को हुन तिनीहरु? तिनीहरू त्यहाँ किन छन्? उनीहरू किन ख्याल गर्छन्? तिनीहरूलाई के चाहिन्छ र के चाहिन्छ?
तपाईंको लक्ष्य परिभाषित गर्नुहोस् - निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरू SMART = विशिष्ट, मापन योग्य, प्राप्य, यथार्थवादी, र समय चालित छन्।
एक बाध्यकारी सन्देश शिल्प गर्नुहोस् - यसलाई सरल, कंक्रीट, विश्वसनीय, र लाभदायक राख्नुहोस्।
एक रूपरेखा सिर्जना गर्नुहोस् - किन मानिसहरूले ख्याल राख्छन् भन्ने बारे परिचयको साथ सुरू गर्नुहोस्, फाइदाहरू वर्णन गर्नुहोस्, तपाईंको सन्देशलाई तथ्यहरूको साथ समर्थन गर्नुहोस्, प्रति स्लाइड एउटा उप-सन्देश राख्नुहोस्, र विशेष कल-टु-एक्शनको साथ समाप्त गर्नुहोस्।
स्लाइड एलिमेन्टहरू मिलाउनुहोस् - एक प्रभाव सिर्जना गर्न फन्ट आकार, आकार, कन्ट्रास्ट र रंग प्रयोग गर्नुहोस्।
एक थिम बनाउनुहोस् - र colors्गहरू र फन्टहरू छान्नुहोस् जसले तपाईंको प्रतिनिधित्व गर्दछ, तपाईंको कम्पनी, र तपाईंको अडान। हामी हाम्रो प्रस्तुतीकरणहरू जस्तै हाम्रो साइटलाई ब्राण्ड गर्ने प्रयास गर्दछौं ताकि त्यहाँ मान्यता छ।
दृश्य तत्वहरू प्रयोग गर्नुहोस् - %०% व्यक्तिहरू भिजुअलमा राम्रो प्रतिक्रिया दिनेछन र% vis% भिजुअलका साथ जानकारीलाई राम्रोसँग राख्नेछ।
चाँडै तपाईंको श्रोता हुक गर्नुहोस् - Min मिनेट औसत ध्यान अवधि हो र तपाईंको दर्शकले तपाईंले भन्नुभएका आधा सम्झने छैनन्। एउटा गल्ती मैले सुरुमा गरिरहेको थिए मेरो प्रमाणहरूको बारेमा कुरा गर्दै ... अब म यसलाई MC मा छोड्दछु र मेरा स्लाइडहरूलाई उनीहरूले आवश्यक पर्ने प्रभाव र अधिकार प्रदान गर्न सुनिश्चित गर्दछन्।
प्रभावकारिता मापन गर्नुहोस् - म मेरो भाषणको लगत्तै ध्यान दिन्छु कति व्यक्ति मसँग कुरा गर्न चाहन्छन्। अधिक व्यापार कार्ड, राम्रो मेरो प्रदर्शन! मानिसहरू मोबाइल भएकाले म मेरो न्यूजलेटरको सदस्यता लिन पाठ पठाउन तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछु (पाठ ARK१ text१71813 मा मार्केटिंग)।
अन्तमा, दर्शकबाट वा नेटवर्कबाट तत्काल उत्पन्न गरिएको व्यवसायले तिनीहरू तपाईंलाई दर्शाउँदछ कि तपाईं कति सफल हुनुहुन्छ भनेर देखाउँदछ। बोल्न आमन्त्रित गर्नु सँधै प्लस पनि हुन्छ!
टैग: क्लेमेन्स लेपरहरूप्रभावकारी प्रस्तुति सुझावहरूइंफोग्राफ़कमुख्य प्रस्तुतीकरण सल्लाहहरूमुख्य सुझावहरूपावरपोइन्ट इन्फोग्राफिकPowerPoint प्रस्तुति सुझावहरूPowerPoint सुझावहरूpptpopप्रस्तुति इन्फोग्राफिकप्रस्तुतीकरण सल्लाहहरूप्रस्तुति सुझावहरू इन्फोग्राफिकप्रस्तुत गर्दैप्रेजीबोल्ने
विज्ञापनदाताहरू कसरी मार्च पागलपनमा क्यापिटल हुँदैछ?
अगस्ट 11, 2016 बेलुका 6:01 बजे
प्रभावकारी भिजुअलहरू प्रयोग गर्नाले निश्चित रूपमा तपाईंको दर्शकहरूलाई चासो राख्नेछ। तर तिनीहरूलाई अधिक प्रयोग नगर्न निश्चित गर्नुहोस्! यदि तिनीहरूमध्ये धेरै छन् भने तिनीहरू विचलित हुन सक्छन्। सुझावहरू साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद।